Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 493924 times)
« Reply #570 on: August 14, 2011, 02:34:58 PM »
" အခုလာရတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်က ကျွန်တော့်ဆီက ငှားသွားတဲ့ထီးကို ပြန်ယူချင်လို့ပါ "
" ဟောဗျာ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မနေ့ကအိမ်လာလည်ရင်း ခဏငှားသွားတယ်ဗျ။ သူ့ဆီသွားတောင်းတော့ ယောက်ဖတစ်ယောက် ခဏငှားသွားလို့ပါတဲ့။ အရေးကြီးသလား၊ လိုက်ရှာပေးမယ်လေ "
" အရေးကြီးပါသော်ကောဗျာ။ ကျွန်တော်ကလည်း အဲဒီထီးကိုငှားဆောင်းလာခဲ့တာ။ အဲဒါလာတောင်းနေလို့ဗျို့။ သူကလည်းဒီထီးဟာ သူ့ထီးမဟုတ်ဘူး ခဏငှားလာတာတဲ့ "
credit @ mutdfan.com
« Reply #571 on: August 14, 2011, 02:47:30 PM »
တရုတ်စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းရှင် ဝေချောင်လင်းသည် လုပ်ငန်း ကိစ္စဖြင့် နယူးဒေလီ မြို့သို့  ရောက်လာစဉ်
အရေးပေါ် နာမကျန်း ဖြစ်၍ ဆေးရုံ တက်ရသည်။
ဝေချောင်လင်းနှင့် သိကျွမ်းသော်လည်း တရုတ်စကား မတတ်သည့် အိန္ဒိယ လုပ်ငန်းရှင် ဘာဂျမ်း ဆေးရုံသို့
လူနာမေး ရောက်လာ သည်။
ဝေချောင်လင်း၏ ကုတင်အနီးတွင် ထိုင်နေသော ဘာဂျမ်းကို ဝေချောင်လင်းက မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်ပြီး
`“လီကိုင်ယန်ကျိဂွမ်” ဟု ပြောသည်။
ဘာဂျမ်းကက ဘာပြောမှန်းမသိ၍ ဝေချောင်လင်း ကိုသာ ငေးကြည့် နေသည်။
“လီကိုင်ယန်ကျိဂွမ် ” “လီကိုင်ယန်ကျိဂွမ် ” ဟု ဝေချောင်းက အကြိမ်ကြိမ် ပြောသည်။
ဘာဂျမ်းက နားမလည်၍ ထိုင်နေမြဲ အတိုင်း ထိုင်ကြည့်နေဆဲ “လီကိုင်ယန်ကျိဂွမ်” ဟုအော် အသံပြုရင်း
ဘာဂျမ်း အလွန် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံမှ နေအိမ်သို့  ပြန်လာသည်-
နောက် တစ်လခန့် ကြာသောအခါ ဘာဂျမ်း ရှန်ဟိုင်းမြို့ သို့ အလုပ် ကိစ္စဖြင့် ရောက်လာ၏။
ရှန်ဟိုင်းမြို့  တစ်နေရာတွင် တရုတ်-အိန္ဒိယ အဘိဓါန်စာအုပ် တွေ့ ၍ ၀ယ်လိုက်ပြီး “လီကိုင်ယန်ကျိဂွမ်” ၏
စာမျက်နှာ ၆၈ တွင် တွေ့ ၏။
“လီကိုင်ယန်ကျိဂွမ် ” = အောက်ဆီဂျင် ပိုက်ကို ဖင်ခု မထိုင်ထားပါနဲ့ ။
« Reply #572 on: August 14, 2011, 02:49:55 PM »
လုပ်လိုက်လေ ကြာသလားလို့ 
တစ်ခါက (ရှေးရှးတုံးကလို့ ပြောရင် ပိုမှန်မလား) ညမိုးချုပ်တော့ မြို့ တံခါးကြီးပိတ် ထားတယ်တဲ့။
မြို့ ပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်း အချိန်မှီပြန်မလာရင် တံခါးအပြင်မှာပဲ တစ်ညတာကုန်ဆုံးရတယ်။
တစ်ရက်တော့ အရက်သမားတစ်ယောက်ရယ် ဘိန်းသမားတစ်ယောက်ရယ် ဆေးသမားတစ်ယောက် ရယ် မြို့ ထဲ ပြန်ဝင်တာ နောက်ကျလို့ တံခါး ပိတ်ထားတာနဲ့ တိုးပါတော့တယ်။ အရက်သမားက မူးမူးနဲ့ စိတ်ဆိုးပြီး မြို့ တံခါးကို ရိုက်ချိုးမယ်လုပ်ပါလေရော။ ဘိန်းသမားကတော့ ဘိန်းမှိန်းမှိန်းပြီး အရက်သမားကို စိတ်ထိန်းပါ မင်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး လာပါ ငါတို့ ဒီနေရာလေးမှာ အိပ်ပြီး မနက်ကိုစောင့်တာပေါ့လို့ ပြောလိုက်တယ်။ ဆေးသမားကတော့ မြို့ ရိုး တံခါးကို ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီး ဘိန်းသမားနဲ့ အရက်သမားကို လှမ်းပြောတယ်။ ငါတို့ မြို့ ထဲဝင်လို့ ရမဲ့ နည်းလမ်းတွေ့ ပြီဟေ့။ အရက်သမားနဲ့ ဘိန်းသမားလည်း အားရ၀မ်းသာစွာနဲ့ ဘယ်မှာလဲဆိုပြီး ဆေးသမားနား ကပ်သွားတယ်။ ဒီမှာလေ အပေါက်တွေ့ လား ငါတို့ ကိုယ်ကို ကျုံ့ ပြီး ဒီအပေါက်ထဲကနေ တိုးဝင်သွား ရင် မြို့ ထဲ ရောက်ပြီဟ ဟု လက်သန်းလောက်ရှိသော အပေါက်လေးကို ညွှန်ပြလိုက်သည်။
« Reply #573 on: August 14, 2011, 03:21:00 PM »
*ပြန်လည် ကူးယူ တင်ပြသည်
« Reply #574 on: August 14, 2011, 03:24:50 PM »
« Reply #575 on: August 14, 2011, 03:26:39 PM »
သူဟာ အကောင်းဆုံးပဲ !
အရင်တုန်းကမြို့ တစ်မြို့ မှာဆေးဆရာတွေချည်းဘဲ့စုပြီးနေတဲ့ရပ်ကွက်တစ်ခုရှိတယ်.....။
ထူးခြားတာက ဆေးဆရာတစ်ယောက်ယောက်ကကုလို့ လူနာတစ်ဦးဦးသေဆုံးခဲ့ရင်
အုန်းခွံ တစ်ခုကို ကုတဲ့ဆရာရဲ့ အိမ်ရှေ့မှာလူမြင်အောင်ချိပ်ဆွဲထားရတယ်.....။
၂ယောက်သေရင် ၂ခု ။ ၃ ယောက်သေရင်ရင် ၃ ခုပေါ့.........
တခြားရပ်ကွက်က သားဖနှစ်ဦးမှာ ဖအေလုပ်တဲ့သူက အတော်ကြီး
သားဖြစ်တဲ့သူကို ဆေးဆရာ ရပ်ကွက်သွားပြီး
အကောင်းဆုံး သမားတော်ကိုရွှေးပြီး ပင့်ခဲ့ဖို့ ခိုင်းလိုက်တယ်.....။
သားဖြစ်တဲ့သူလည်း အဲဒီရပ်ကွက်သွာပြီး အကောင်းဆုံး သမားတော်ကို လိုက်ရှာတယ်.....။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆေးဆရာတွေရဲ့ အိမ်ရှေ့တွေမှာက အုန်းခွံတွေ ပလူပျံနေလို့ လေ......တစ်ချို့ အိမ်တွေက အခု ၂၀ ၊ ၃၀ ...တစ်ချို့ 
အိမ်တွေဆိုအများကြီးဘဲတဲ့....အုန်းခွံ ဆွဲမထားတဲ့အိမ် ကတော့ တစ်အိမ်တောင်မရှိဘူးတဲ့.....။
ရပ်ကွက် အစွန်နားရောက်တော့ အုန်းခွံနှစ်ခုတည်းဘဲ့ဆွဲထားတဲ့ ဆေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ကို
ရှားရှားပါးပါးတွေရသတဲ့......သားဖြစ်တဲ့ သူလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ အိမ်ကိုပင့်လာပေါ့.....
ဆေးတွေတိုက်....ဆေးတွေပေးပြီး .....အပြန်ကျတော့ သားဖြစ်
"ဆရာက အိမ်ရှေ့ မှာအုန်းခွံ နှစ်ခုတည်း ဘဲ့ ဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ အတော်စွမ်းတာဘဲ့နော်"..တဲ့.....။
"ဒါနဲ့ ဆရာကလူနာဘယ်နှစ်ယောက်ကု ဖူးလဲ"....လို့ ဆက်မေးတယ်....။
ဆေးရာကြီး ရဲ့ အဖြေစကားကြောင့် သားဖြစ်တဲ့သူ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်......။
ဆေးဆရာကြီးက လက်ညိုးနှစ်ချောင်းထောင်ပြီးတော့ ပြန်ဖြေတယ်......။
« Reply #576 on: August 17, 2011, 04:33:49 PM »
၁) ခွေးမူး.... မူးလာသည်နှင့် အခြားသူများကို ဒေါသထွက်ကာ ရန်ရှာတတ်သူ
၂) ဆ်ိတ်မူး..... တွေ့သမျှ စားစရာများ အမြည်းများကို တယောက်တည်း ဒိုင်ခံ အားပေးသူ
၃) ကြက်မူး.... ရေချိန်မှန်လာလျှင် မိန်းကလေးများကိုသာ စိတ်ဝင်စားတော့သူ
၄) မျောက်မူး....ခုန်ချင်ပေါက်ချင် ကချင်လာသူ
၅) ၀က်မူး....တွေ့ရာနေရာတွင် ထိုးအိပ်တတ်သူ
၆) ဆက်ရက်မူး..... အဆက်မပြတ် တော်ကီလွှတ်သောသူ
၇) တောက်တဲ့မူး.....ခွါမရတော့အောင် ကပ်ရစ်၍ တိုင်ပတ်သောသူ
၈) နွားမူး....မူးလာလျှင် ချည်တိုင်ကို သတိရ၍ ပြန်ရန်ပြင်တတ်သူ
၉) ဖွတ်မူးပုတတ်မူး.... အမူးပြေသွားလျှင် မူးနေစဉ် လုပ်သည်များကို ဘာမျှမမှတ်မိဟု ပြောတတ်သူ
၁၀) မြွေမူး... မည်မျှသောက်သောက် တွင်းဝင်ဖြောင့်သူ (လုပ်စရာရှိသည်များကို မမှားဘဲလုပ် နိုင်သူဟု ဆိုလိုသည်
၁၁) သာလိကာမူး... နှစ်ပက်လောက်သောက်ပြီးတိုင်း ငါမူးနေပြီကွ ဟု အမြဲပြောတတ်သူ
« Reply #577 on: August 17, 2011, 08:34:56 PM »
ပထမလူ = မနေ့ညက မင်းတို့လင်မယား ရန်အကြီးအကျယ် ဖြစ်ကြတယ်ဆို။
ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုပြီးသွားတာလဲ .. .. ။
ဒုတိယလူ = ဘယ်ရမလဲ ဒီမိန်းမ ဒူးထောက်ကျသွားတာပေါ့။ ဒူးနှစ်ဖက်တင်မကဘူး
လက်နှစ်ဖက်ပါ ထောက်သွားတယ်ကွ ။
ပထမလူ = အလဲ့ တယ်ဟုတ်ပါလား၊ မင်းမိန်းမက လေးဖက်ထောက်ပြီး ဘာပြောလဲ ဆိုစမ်းပါဦး။
ဒုတိယလူ = အင်း ငါ့မိန်းမက လေးဖက်ထောက်ပြီး ရှင် အခုချက်ချင်း
အဲ့ဒီကုတင်အောက်က ထွက်ခဲ့၊ ယောက်ျားပီပီ
သတ္တိရှိရှိ ကျုပ်ကို ရင်ဆိုင်စမ်းပါတဲ့ ... ......
« Reply #578 on: August 23, 2011, 09:18:59 PM »
သူငယ်တန်းတွင် ကလေမလေးတစ်ယောက် ငိုမဲ့ငိုမဲ့နှင့် အတန်းရှေ့သို့ ထွက်လာကာ
" ဆရာမ သူကသမီးကို ရည်းစားစာပေးတယ် " ဟုပြောကာစာရွက်ခေါက်လေးကိုင်ထား
ဆရာမက " ဟုတ်လားပြပါအုံး "
စာရွက်ထဲတွင်ရေးထာတာက " ၀၀၀၀၀၀၀၀၀ ။ ၀၀၀၀၀၀၀၀ " (၀လုံး)
အတန်းထဲတွင် ကလေးတယောက် အိမ်မှယူလာသော အရုပ်ကို သူ၏အတန်းဖော်အားကြွားနေသည် ။
" ငါ့အရုပ်ကမိုက်တယ် ခါးကိုတို့လိုက်ရင် I love you လို့ အော်တယ်သိလား "
အတန်းဖော်က " ဟာ....ဟုတ်လား....ဒါဆိုရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးရှေ့ရောက်ရင် အရုပ်ကိုခါးတို့လိုက်ရုံပဲလေ... "
ကလေးတစ်ယောက် ဘေးအိမ်သို့ တီဗီသွားကြည့်ရာ မီးပျက်သွားလို့အိမ်ကိုပြန်လာသည် ။
ကလေး - အမရေး.........ဟိုဘက်အိမ်ကလူတွေက တော်တော်ညစ်ပတ်တယ်သိလား.....(မကျေနပ်တဲ့အသံနှင့်)
အမ - ဘာဖြစ်လို့လဲ..
ကလေး - တီဗီကြည့်နေတုန်း မီးပျက်သွားတော့....ကလေးတွေပြန်ကြ မီးပျက်သွားပြီတဲ့.....
ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ပြလို့ရရဲ့သားနဲ့.... မပြချင်တိုင်း....ဟွန်း......
ဦတင်အောင်တစ်ယောက် ဗိုက်ထဲမှရစ်ကာနာလာသဖြင့် ချောင်းဆီထွက်လာပြီး ချောင်းကမ်းပါးတွင် ကိတ်စဖြေရှင်းရန် ထိုင်လိုက်သည် ။
ချောင်းကမ်းပါးတွင် ရေထားသောစာကြောင့် သူမျက်လုံးပြူးသွားသည် ။
" ကမ်းပါးတွင်. .ချီး.. တင်အောင် မပါရ "
« Reply #579 on: August 26, 2011, 02:28:33 PM »
်စာသင်ခန်းတွင် ဆရာမမှ တပြည့်များအား ပြင်ပဗဟုသုတရရန် မေးခွန်းတစ်ခုဆီမေးကြလို့ ပြောသည်
ဘွိုင်း : ကျွန်တော်တို့ အသက်ရွယ်မှာ ကိုယ်ဝန်ရ ခလေးရ ဖြစ်နိုင်ပါသလား
ဆရာမ : ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ မဖြစ်နိုင်ဘူး မရနိုင်ဘူး
ထိုအခါ အနားရှိ ကျောင်းသူကောင်မလေးအား လှည့်၍ပြောလိုက်တာက
ဘွိုင်း : တွေ့လား ငါပြောသားပဲ စိတ်မပူပါနဲ့ ဆိုတာ
ပါတီတစ်ခုတွင် ခတ်ဆန်လှပသောမိန်းမတစ်ယောက်အနားသို့ မူးနေတဲ့လူကပ်လာပြီး မိတ်ဖွဲ့ရင်း စကားစမြည်ပြောကြ၏
ကျား စိတ်မရှိဘူးဆိုရင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတစ်ခုလောက် မေးလို့ရမလား
မ ကျမသိသားပဲ ရှင် ဘာမေးချင်တယ်ဆိုတာ ကဲပါ မေးခြင်တာသာမေးပါ
ကျား ဟိုဗျာ ခင်ဗျား ယောက်ကျား ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့များ ကာမဆက်ဆံခဲ့ဘူးလဲလို့
မ တော်တော့ ဒါ ရှင့်ကိစ္စလား My business
ကျား အိုး ဂွတ် How much